टिभिएसको जुपिटर–१२५ भोलि सार्वजनिक हुँदै, कति पर्ला मूल्य? :: एजेन्सी :: Setopati
टिभिएसको जुपिटर–१२५ भोलि सार्वजनिक हुँदै, कति पर्ला मूल्य?
नयाँ दिल्ली, असोज २०
टिभिएसले भोलि, बिहिबार नयाँ स्कुटर सार्वजनिक गर्दैछ। कम्पनीले कुन स्कुटर सार्वजनिक गर्ने भन्ने ठ्याक्कै खुलाएको छैन। तर पछिल्लो केही समयदेखि बिहिबार १२५ सिसीको जुपिटर सार्वजनिक हुने अनुमान लगाइएको छ।
कम्पनीले केही समयअघि नयाँ स्कुटरको टिजर सार्वजनिक गरेको थियो। भिडिओमा देखाएअनुसार स्कुटरको अगाडि एलइडी डिआरएल हुनेछ। कम्पनीले नयाँ दुई पाङ्ग्रेको लागि ‘कम एक्पेरियन्स द मोर’ भन्दै ट्यागलाइन दिएको छ।
भोलि सार्वजनिक हुने स्कुटरमा एनटर्क १२५ मा भएकै इन्जिन हुने अनुमान लगाइएको छ। यसमा १२४.८ सिसीको डिस्प्लेसमेन्ट हुनेछ। यसमा सिंगल सिलिन्डर फ्युल इन्जेक्टेड मोटर हुनेछ। जसले ७,००० आरपिएममा ९.१ बिएचपी पावर र ५,५०० आरपिएममा १०.५ एनएमको टर्क जेनेरेट गर्छ। यसको इन्जिनसँगै सिभिटी गियर बक्स पनि हुनेछ।
नयाँ स्कुटरबारे कम्पनीले धेरै विशेषताहरू खुलाएको छैन। तर जुपिटर १२५ सार्वजनिक भएसँगै यसले १२५ सिसी सेगमेन्टका स्कुटरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।
नयाँ जुपिटर १२५ मा डिजिटल स्क्रिन, बाहिरै फ्युल क्याप, शून्य आवाज स्टार्ट प्रविधि र टिभिएस कनेक्ट मोबाइल एपको विशेषता हुनेछ। टिभिएस कनेक्ट मोबाइल एपमा न्याभिगेसन असिस्ट, टप स्पीड रेकर्डर, इन-बिल्ट ल्याप टाइमरजस्ता विशेषताहरू समावेश गरिएको हुन्छ।
यो स्कुटरले बजारमा होन्डा एक्टिभा १२५, हिरो माएस्ट्रो एज १२५ र सुजुकी एक्सेस १२५ सँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। भारतीय अखबार अटो हिन्दुस्तानले यो स्कुटरको मूल्य भारु ७५ हजारदेखि ८१ हजारसम्म हुने अनुमान लगाएको छ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज २०, २०७८, ०६:४७:२३